Njakịrị na akụkọ Ndị Kraịst 50+ dị ọcha 2022
ihe ọmụmụ weebụ
Njakịrị na akụkọ Ndị Kraịst 50+ dị ọcha
April 23, 2022 Eze James
Nke a bụ akụkọ gbasara njakịrị Ndị Kraịst na-atọ ọchị dị ọcha na akụkọ iji mee ka ị wepụta “Ha” na hallelujah, ma meekwa ka akụkụ gị kewaa dị ka oke osimiri uhie. Chere, ị nwere obi abụọ m? Ọ dị mma, soro m nke ọma mgbe ahụ ka ịhụ ihe m na-ekwu.
Dị ka a Christian, eleghị anya, ị ọbụna gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Ndị Kraịst kacha elu na USA, Ị na-eche ebe ị ga-enweta njakịrị Ndị Kraịst na-akpa ọchị iji mee ka ị na-achị ọchị nke ukwuu, elela anya ọzọ. Ị nọ n'ezie ebe kwesịrị ekwesị.
N'oge gara aga, ka m na-agbalị ịchọta ụfọdụ Ajụjụ ndị na-enweghị isi na Baịbụl, Ọ dị ka ihe siri ike na achọrọ m ihe ga-eme ka akwara m dị jụụ ma mee ka ike na-erugharị, ma ị maara ihe m nwetara?
Ee, echiche gị ziri ezi. M na-eji nke m ngwa Akwụkwọ Nsọ audio Ige nti njakịrị egwu ndi Kristian nke mere ka m chịa ochi dika odighi mbu.
Ị nwere ike were nkuzi Akwụkwọ Nsọ n'ịntanetị n'efu ma ọ bụ ọbụna gaa otu n'ime Mahadum Ndị Kraịst kacha mma na Canada, ma ndị a na-akpa ọchị Christian njakịrị m na-achọ ịkọrọ gị nwere ike ghara ịhụ ebe ahụ.
Ị na-eche na-arụ ọrụ na otu n'ime obere ọrụ mgbakasị ahụ bụ naanị ụzọ na-ekpori ndụ? Chere ruo mgbe itinye aka na njakịrị na akụkọ Ndị Kraịst na-atọ ọchị.
N'agbanyeghị na ndị mmadụ na-ekwu na e nwere ajụjụ gbasara Chineke na Baịbụl a na-apụghị ịza. Ọfọn, echere m na ọ bụrụ na ị gụsịrị akwụkwọ na otu n'ime Mahadum Ndị Kraịst kacha mma na UK, ị ga-enwe ike ịnwale ha. Onye maara, ị ka nwere ike ịza ha, gụnyere njakịrị Ndị Kraịst na-atọ ọchị.
Ị dịla njikere ugbu a maka ịnya ụgbọ ahụ?
Ị ka nwere ike ịkpọ ndị agha ịnyịnya n'ihi na ị ga-achọ enyemaka iji bilie n'ala ka ị na-agụ site na njakịrị Ndị Kraịst ndị a na-akpa ọchị. Chere! M kwuru na ndị agha ịnyịnya, ọ bụghị ndị agha.
Achọrọ m ibido ugbu a na njakịrị Ndị Kraịst na-atọ ọchị, mana ka m zaa ajụjụ ole na ole nwere ike na-ewute gị n'okpuru. Anyị nwekwara akụkọ na Ọmụmụ Baịbụl nwere ajụjụ na azịza ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ya.
Njakịrị ọ̀ dị Ndị Kraịst njọ?
Gịnị Ka Ndị Kraịst Na-ekwesịghị Na-achị ọchị?
Njakịrị Ndị Kraịst na Akụkọ
Njakịrị Ndị Kraịst na-atọ ọchị na akụkọ - Ajụjụ
Gịnị bụ Njakịrị Ndị Kraịst One-Liner?
Njakịrị, n'ikwu okwu n'Akwụkwọ Nsọ, adịghị njọ nye Ndị Kraịst ma e wezụga n'ọnọdụ ebe a na-eji ya eleda onye ọzọ anya. Dị ka Ndị Kraịst, okwu anyị kwesịrị ịdị na-ewuli elu mgbe nile, ọ bụghịkwa nleda anya.
Ugbu a, iji mekwuo nke ọma, Ilu 17:22 na-ekwu na “obi nke na-aṅụrị ọṅụ bụ ọgwụgwọ dị mma: ma mmụọ e gburu mmụọ na-eme ka ọkpụkpụ takọọ.”
Ebe ọ bụ na njakịrị Ndị Kraịst na-akpa ọchị adịghị njọ, ọ dị mkpa ịmara na e nwere oke ebe Ndị Kraịst anaghị etinye aka n'ụdị njakịrị niile.
Ndị Kraịst ekwesịghị itinye aka n'ịkwa emo na-akparị mmadụ. Ọzọkwa, e kwesịghị inwe ihe rụrụ arụ ma ọ bụ okwu nzuzu n’etiti Ndị Kraịst.
Ugbu a na m mere ikpe ziri ezi na ajụjụ gị n'elu, ka ịkwaga n'ime dị ọcha na-akpa ọchị Christian njakịrị na akụkọ.
M nnọọ banyere otu n'ime ụmụ klas m ụlọ akwụkwọ sekọndrị, o weere m na Jizọs Kraịst. O tiri mkpu, "Jizọs, ọ bụ gị?"
Iri Suya na enyi ya kwụrụ ụgwọ ya dị mma ka a chepụtara ya karịa ahụmahụ. Ị ga-ajụ Jizọs, sị, "Onyenwe anyị ọ̀ bụ oge kwesịrị ekwesị iburu akụkụ ọzọ?"
Mgbe ịchọrọ ihi ụra n'ụlọ, gbanyụọ obere redio. Ma mgbe ị nọ na chọọchị, n'etiti igwe okwu iri na-ada ụda na ntị gị, ị na-ehi ụra n'udo dị ka nwa ọhụrụ. A na-akpọ nke a ọrụ nro ndị mmụọ ọjọọ.
Ọ bụrụ na ị nweghị ego ugbu a, ma ị chọghị inweta puku naira iri abụọ, ziga nkọwa akaụntụ gị ngwa ngwa ka m tinye ha na ebe ekpere m.
Ị ma na e buru pidgin mee ihe na Baịbụl? Gaa Jenesis 13:8 “anyị bụ ụmụnna”
Dị ka nwa agbọghọ na-enwe ọṅụ, enyi gị nwoke ekwesịghị ịrịọ ka ọ hụ gị n'abalị. Ọ bụrụ na ọ mee, gwa ya “Ọṅụ na-abịa n’ụtụtụ”
Kama inye 5000 agụụ na-agụ nri dị ka Jizọs mere, ọtụtụ ndị pastọ na-eri nri site na 5000 agụụ na-agụ. M na-agha ụgha?
Mgbe ụfọdụ, a na m asị na nguzozi akaụntụ m ga-ebili ka Jizọs mere.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ agbọghọ niile a na-ahụ na netwọk mmekọrịta mara mma, ma mgbe ị zutere ha n'anụ ahụ, ị ​​ga-enye ndụ gị nye Kraịst.
Kedu ka ụkwụ na-ebughị gị gaa n'ụka ga-ebuga gị n'eluigwe?
Ha na m: na 25, ị kwesịrị ị nwere ụgbọ ala nke gị, ụlọ nke gị, azụmahịa guzosie ike, wdg M ka ha: zuo ike enyi, Jesus bụ ihe karịrị 2000 afọ ma ka nọ n'ụlọ nna ya.
Ụka kwesịrị ịmanye iwu na-akwụsị iji ngwa Akwụkwọ Nsọ. Ụfọdụ ụmụnwoke na-enyocha naanị ndụ ndụ.
N'oge a, tupu ndị mmadụ agwa m nsogbu ha, m na-edepụta nke m niile. Anyị na-ekpezi ekpere maka ibe anyị.
Enwere m ike ịga hell? Mba! Setan ka nwere iwu mgbochi ahụ megide m.
Ahụtụbeghị m ihe e dere n’elu nkume ili nke kwuru “nwụrụ n’ihi na ahụghị m mmadụ iri”
Ọ bụghị onye ọ bụla nyochara gị nwere mmasị n'ezie. Ụfọdụ chọrọ igosi ma amoosu ha arụrụ ọrụ.
Oge ahụ na-emenye ihere mgbe ị nọdụrụ ala n'akụkụ ọnụ ọnụ gị na ụka, na mberede, nwanne gị nwoke ji naira iri abụọ pụta n'aka… "Nwanne, mummy kwuru na ị ga-eji ya chụọ àjà"
Ezigbo onye nwe, gwa mmụọ ozi na-eme uwe ọcha m n'eluigwe ka o mee ka ọ dabara, ọ bụghị dị ka nke m na-ahụ na ihe nkiri Nigeria. Enweghị m ike ịnọ n'ụlọ nna m na-eyi uwe ime nwa.
Okwukwe bụ mgbe ị na-enweghị ọrụ mana ị na-eyi uwe na-ebu obere akpa na-agagharị na ala na-agbagwoju anya onye iro gị.
CHINEKE dị ka ikuku oxygen. Ị gaghị ahụ ya, ma ị gaghị adị ndụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya. Dị umeala n'obi!
Mgbe onye na-ese foto ụka bụ enyi gị, ị na-apụta ugboro ugboro na ihuenyo ụlọ ụka karịa onye nkwusa.
Nwanne m nwoke lọtara n'ụlọ ya na enyi ya nwanyị, ọ nọwo na-elekwa m anya ka m hapụ ụlọ ka ha nwee ike ịnọrọ onwe ha. Anaghị m aga ebe ọ bụla; Anaghị m akwado ihe ọjọọ.
Otú ụfọdụ ndị ga-esi na-arụsi ọrụ ike n’ide ihe n’ọgbakọ ga-eme ka i chee na ha ga-agụ ya ma emechaa.
Ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-ekpe ekpere bụ ịlụ nwoke na-atụ egwu Chineke, ma izu abụọ ka alụmdi na nwunye gasịrị, ha na-arịọ iPhone kama ịbụ Bible King James.
Ututu ọ bụla bụ ụbọchị ọzọ ị ga-apụ na ịgba ọsọ, ma ọ bụghị ya, ị ga-aga n'ihu na-eti mkpu kwa ụbọchị Sọnde ọ bụla “M anabata”
Rut na Esta bu ụzọ kwagakwuru ndị ikom ahụ lụrụ ha. Ugbu a, ọ bụ naanị ha bụ ụmụ nwaanyị ndị nwere akwụkwọ na Baịbụl. Nwannem, tufuo nganga gi!
Obi ụtọ bụ mgbe ị nọ ọdụ n'akụkụ onye nwe ụlọ na ụlọ ụka ma akwụghị gị ụgwọ. Mgbe ahụ, pastọ ahụ na-agwa gị na mberede ka ị gwa onye agbata obi gị “onye agbata obi, Jizọs akwụla m ụgwọ”
Na-ekwusa ozi ọma n'ihi na a họpụtara gị, ọ bụghị n'ihi na ị na-enweghị ọrụ.
Kwụsị ịgbanye ego gị tupu itinye ya n'igbe onyinye, Chukwu abụghị onye ọrụ.
Mgbe nwunye Lọt laghachiri azụ wee ghọọ ogidi nnu, ònye laghachiri ime ka o guzosie ike?
O nweghị ihe dị ka ọnwụ eke na Naịjirịa. Mgbe ọ bụla mmadụ nwụrụ, onye iro na-akpata ya.
Nwannem, ekwela ka ndikom ndia duhie gi. Ọ bụghị ndị ikom niile yi uwe suut bara ọgaranya, ụfọdụ nọ n'òtù ukwe.
Aha Facebook nke eze nwanyị gburu na 18 bụ Mhiz Pwetty Chomzy. Na 28, ọ na-aghọ onye isi Lady Chommy, na 38, ọ na-aghọ Chioma Jesus
Ha kwuru na enweghị m ike ịhụ onye m na-ahụbeghị n’anya, ma m mụmụrụ ọnụ ọchị ma zaa, sị, Ahụbeghị m Chineke, ma ahụrụ m ya n’anya.
Ị̀ chetụla otú ụwa ga-adị ma ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke otú ahụ ha si atụ ndị agha egwu?
Mgbe aha mbụ gị bụ ebube, na onye gị na ya na-akpa ugbu a bụkwa ebube, ọ pụtara na ị na-esi n'ebube gaa n'ebube.
Ọ bụrụ na ị toasted ihe karịrị iri abụọ na ise ma ha ekwetaghị, ọ bụ ihe ịrịba ama doro anya na ịlụ nwanyị abụghị ọkpụkpọ gị. Gịnị ma ị gbalịa izisa ozi ọma?
Anyị ka gụchara Ista. N'oge a na 2000 afọ gara aga, Judas Iskarịọt nwetara njikere.
Ọbụna n'ụbọchị ikpeazụ, ụfọdụ ụmụ agbọghọ ka ga-ese foto n'ihu ọnụ ụzọ ámá nke eluigwe wee kọwaa ya "na-ekpo ọkụ n'ebe ndị enyi m mmụọ ibe m, ọtụtụ ihendori"
Ị na-adọpụ uche ndị mmadụ site n'ịbịa n'oge na chọọchị na-eje ije n'ihu dị ka asọmpi nọmba mbụ.
Mgbe ụfọdụ, m na-eche otú obi dị ndị ji Lazarọs ụgwọ mgbe Jizọs kpọlitere ya n’ọnwụ.
Kedu ka Methuselah si dịrị ndụ afọ 969 n'ụwa n'enweghị ịntanetị ma ọ bụ ọkụ eletrik? Gịnị kpọmkwem ka ọ na-eme?
Okwukwe bụ mgbe onye agbata obi gị na-eti mkpu na ọ gaghị echere ka ọ rụchaa ịzụrụ ụgbọ ala n'ihi na ọ zụtara igodo.
Ka ị na-ahụkwu ndị mmadụ, otú ahụ ka ị ga-aghọtakwu ihe mere Noa ji kwe ka ọtụtụ anụmanụ bata n’ụgbọ ahụ karịa ụmụ mmadụ.
Mgbe ọ bụla m na-ahụ map ndị dị n'azụ Akwụkwọ Nsọ, ọ na-enwe mgbagwoju anya. Ọ dị ka ndị pastọ na-ezochi ụzọ e si aga eluigwe n’ihi na ha anaghị ekwusa ya.
Mgbe m batara n'ụgbọelu wee rute na mbara igwe, m ga-esi n'ọnụ ụzọ azụ gbapụ ma banye n'eluigwe.
Adam bụ onye kasị agba ọsọ n'ọsọ ahụ n'ihi na ọ bụ ya bụ onye mbụ n'agbụrụ mmadụ.
Mgbe ụfọdụ, m na-eche na atọm bụ ndị Katọlik n'ihi na ha nwere uka.
Ọ bụrụ na Meri nwere Jizọs na Jizọs bụ obere atụrụ, ọ̀ pụtara na Meri nwere obere atụrụ?
Ị̀ nọ na-eche otú nwunye Jona si meghachi omume mgbe ọ na-akọ otú azụ̀ ahụ si loda ya ma gbapụta ya mgbe ụbọchị atọ gachara na Ninive?
Olee ụdị nwoke Boaz bụ tupu ya alụọ Rut? Ọfọn, ọ bụ nnọọ obi ebere.
Ị̀ nọ na-eche ihe anyị nwere nke Adam na-enwetụbeghị? Ndị nna ochie!
Chineke kere nwoke tupu nwanyị n'ihi na ọ chọghị ndụmọdụ gbasara otu esi eme ya.
Ha jụrụ m, gịnị kpatara anyị ji aza “Amen” kama “Nwanyị nwanyị”, m wee zaa, ọ bụ otu ihe ahụ mere anyị ji na-abụ abụ ‘abụ’ kama ịbụ nke ya.
Ọ dịghị onye a pụrụ iji tụnyere Ebreham n'ihe banyere ịmara ndị mmadụ. Nwoke ahụ maara ọtụtụ ihe.
Fero na-eme egwuregwu n'ihi na o nwere ogige.
Kedu ihe ị na-akpọ onye amụma bụkwa onye isi nri? Habakuk
Kedu ụdị ụgbọ mmiri ndị kwere ekwe chọrọ ịbanye? Ịbụ ndị na-eso ụzọ, ofufe, na mkpakọrịta
Ị̀ ma na Mozis bụ nwoke mbụ budata ihe n’ígwé ojii n’ime mbadamba ihe?
ha gwara anyị na e nweghị ụgbọ ala n’oge Jizọs, ma olee otú ndị na-eso ụzọ Jizọs si zukọta n’otu obi?
Otu ụtụtụ Sunday mara mma, onye na-asọpụrụ ya gwara ọgbakọ ya; anyị ga na-agbanwe ụdị ọrụ anyị, mana ihe niile ga-adabere na gị. Ozizi $100 ga-adịru nkeji ise, okwu $50 ga-adịru nkeji iri na ise, na okwu $20 ga-adịru otu awa. Ugbu a, ka anyị were onyinye ahụ, hụ nke m ga-ebuga.
N'okpuru bụ otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara njakịrị na akụkọ Ndị Kraịst na-akpa ọchị. Azala m nke ahụ ka m nyere gị aka kpochapụ gị nke ọma.
Otu-liner njakịrị Christian bụ ndị a;
Ekwela ka nchegbu gị rikpuo gị. cheta na Moses malitere dika akpa nkata
Ụfọdụ ndị mmadụ na-egosi obiọma, nkwanye ùgwù, na mmụọ ụtọ ruo mgbe ị gbalịrị ịnọdụ ala n'ụkwụ ha
Ọtụtụ ndị na-achọ ife Chineke, ma ọ bụ naanị dị ka ndị ndụmọdụ
Onye-nwe ọma ahụ ekeghị ihe ọ bụla na-enweghị nzube. Kedu maka anwụnta?
Ọ dị mfe ikwusa okwuchukwu iri na abụọ karịa ibi otu
Mgbe ị rutere n'ọgwụgwụ gị, ị ga-achọpụta na ọ bụ ebe obibi maka Chineke
Ndị mmadụ nwere nnukwu nsogbu. Ha na-achọ ịnọdụ ala n'ihu ụgbọ ala, ha chọrọ n'etiti okporo ụzọ, ma na-achọ ịnọdụ ala n'azụ na chọọchị ahụ.
Mahadum Ames Christian | Esgwọ, Scholarships, Nyocha, Nbanye
Dallas Theological Seminary nkuzi efu
Eziokwu Ndị Sayensị Na-eme N'ime Akwụkwọ Nsọ Ị Maghị!
Agụmakwụkwọ mmekọ nke ogo Akwụkwọ Nsọ efu
Ụlọ akwụkwọ Bible kacha akwụ ụgwọ na USA maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa
Lowlọ akwụkwọ Klas nke dị elu na-akwụ ụgwọ dị elu na-akwụ ụgwọ na ntinye na ntinye ha
Schoollọ Akwụkwọ Ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ Maka Studentsmụ Akwụkwọ Mba Nile
Ụlọ akwụkwọ kọleji Pentikọstal n'ịntanetị efu kwesịrị ịma
Akwụkwọ islam n'ịntanetị efu
Ụzọ iji nweta akara ugo mmụta doctorate efu na Theology Online
Onye ode akwụkwọ ọdịnaya na onye nrụpụta at Study Abroad Nations | Lee akụkọ m ndị ọzọ
James bụ onye edemede, onye nyocha na onye nrụpụta na SAN. Site na nyocha, o nyerela ọtụtụ ụmụ akwụkwọ aka inweta nnabata na agụmakwụkwọ ná mba ọzọ.
O nwere ọchịchọ na-ekpo ọkụ iji nyere ndị ọkà mmụta aka iru ọnụ ọgụgụ kasị elu nke nrọ agụmakwụkwọ ha na ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ na-atụgharị n'inye ozi ziri ezi iji nyere ụmụ akwụkwọ aka n'oge ọ bụla.
Ewezuga ide ihe, Jemes na-emepụta ihe nrụpụta eserese kacha elu.
Top 10 kacha dị ọnụ ala MBA na India
10 MBA dị ọnụ ala na UK maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa
10 MBA dị ọnụ ala na Australia maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa
Top 10 MBA Scholarships na Australia
ihe ọmụmụ weebụ na-amụ ihe n'ịntanetị
Previous Post:Ihe nkuzi njikwa akụrụngwa mmadụ 9 kacha n'ịntanetị
Next Post:Agụmakwụkwọ Trichology 10 efu n'ịntanetị